के हो शिवलिङ्ग् ?
फ्रेवुअरी 24, 2017 मार्च 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment शिवलिङ्ग्
के हो शिवलिङ्ग् ? प्राय: जसो मानिसले शिवलिङ्ग भन्नाले शिवको लिङ्ग भनेर बुझ्दछन। भनिन्छ शिवलिङ्ग हिन्दु देवता शिवको स्वरूप मानिने लिङ्ग आकारको मूर्ती हो। यो देवी शक्ति वा पार्वतीको प्रतिक मानिने योनी माथि रहने गर्छ। शिव भनेको ईश्वरको एउटा नाम हो । लिङ्ग भनेको संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ चिन्ह हो । शिवलिङ्गको अर्थ हुन्छ ईश्वरको कल्याणकरी स्वरूपको प्रतिक ।
शिवलिङ्ग बास्तबमा प्रकृती र पुरुषको प्रतिक हो । यसको तलको गोलाकार भाग प्रकृती हो भनेको माथीको भाग पुरुष हो । जब प्रकृती र पुरुष मिल्छ तब मात्र सारा सृष्ठी सम्भव हुन्छ । चेतन पुरुषले अचेतन वा जड प्रकृतीमा बिज स्थापना गरेपछी मात्र नै सृष्ठी सम्भव छ । लिङग पुराण अनुसार शिवलिङ्ग बास्तबमा निराकार चिन्ह हो, सम्पुर्ण प्राणीहरुको सिर्जनाको आधार हो । यो ब्रह्माण्डमा जति पनि सृजित बस्तु छन ती सब प्रकृती र पुरुषको संयोजनबाट बनेका छन ।
← वसन्त आऊ मुटुमा रम्दै
नेपालको संक्षिप्त परिचय →
One thought on “के हो शिवलिङ्ग् ?”
Pingback: शिवजीलाई प्रसन्न गराउन भक्तहरूले जान्नुपर्ने उपायहरू